Enhydro quartz micnaha. Dahabku wuxuu u egyahay qaanso ama giraan iib ah - fiidyow
Enhydro quartz macnaha iyo guryaha. Quotada Enhydro ee iibinta waxaa loo adeegsan karaa jaakadaha dahabka sida pendant ama giraan.
Waxay ka kooban tahay goobooyin biyo ah oo ku xirnaa gudaha kristanka markii ay sii kortay. Dhagxaanta ugu sharafta badan waa kuwa leh xumbada dhaqdhaqaaqa, halkaas oo jeebka hawada ku jira kristal yar oo xumbo yar oo biyo ahna lagu dhaqaaqi karo jeebka gudahiisa. Waxyaabaha kale ee loo yaqaan 'enhydro''s waxay leeyihiin xumbooyin biyo ah oo ku dhex jira qaab dhismeedka aan dhaqdhaqaaqa lahayn.
Batroolka enhydro quartz
Sida aad ka arki karto masawirka iyo fiidiyaha, naxaastaani waa mid diamkimer dheeman or quartir batrool, ka Afghanistan. Dhammaantood waxay ka yimaadaan isla miinada laakiin qaar baa leh enzroroz quartz maxaa yeelay waxaa jira dareere la arki karo iyo gaas nuujiyayaal ah oo ku go'doonsan gudaha dhexroorka.
Enhydro quartz macnaha iyo sifooyinka astaamaha
Biyaha ku dhexyaalla kirismaska ​​ayaa laga ilaaliyaa wasakheynta wasakhda warshadaha ee bini-aadamka. Tani waxay ka dhigeysaa mid fiican oo loo adeegsado kuwa doonaya daahirnimada. Noqo daahirkaas maskaxda, jirka ama nafta. Biyaha Tani waa macnaha guud ee nolosha waxayna ka kooban tahay daahirsanaanta qorshihii rabbaaniga ahaa ee asalka ahaa. Mid ayaa laga yaabaa inuu ka fiirsado kiristaayaasha Enhydro quartz oo diiradda saaraya isku xirka qorshahan rabaani ah. Dhagaxan ayaa bixiya xiriir aad u cad oo toos ah oo loogu talagalay Diiwaannada Akashic.
Ku shaqeynta dhagaxan ayaa aad ugufiican nadiifinta iyo nadiifinta ka sameysan sunta dhamaan nidaamka jirka. Isticmaalka kristantkaankan qaab elixir wuxuu u sahlayaa heerar qoto dheer ee jirka nadiifinta jirka iyo ka shaqeynta ruux ahaaneed ee tamarta saxda ah ee loo yaqaan 'enhydro crystals' ay bixiso.
Enhydro quartz oo ka socota Afganistan
Waxaan iibinaa caadadii loo yaqaan 'Enhydro quartz dahabka' sida tirtir ama giraan.